Amụma Nzuzo | ThatsLuck.com
Ozi na nhazi nke data nkeonwe site na saịtị Thatsluck.com
Saịtị a anaghị anakọta data nkeonwe, rnaanị na-anabata kuki nke ndị na-esetịbeghị ihe nchọgharị ha iji gbanyụọ ha na adreesị IP nke PC eji budata ngwanrọ ahụ.
Nke a bụ ihe niile, na nnabata GDPR dị ike kemgbe 25/05/2018, edere ozi a n'ụzọ kachasị mfe.
Onye ọ bụla chọrọ inyere m aka imeziwanye ya nabatara ma nwee ike idegara Luigi TaIamo, onye na-ahụ maka nhazi data na nchedo, na adreesị ozi-e na-esonụ: adm @thatsluck.com
Maka ndị nwere mmasị, dịka ọ dị mkpa, lee ụfọdụ ozi zuru ezu.
Ihe omuma a bu iji mee ka onye obia mara ebe ahu ThatsLuck.com usoro nke ịhazi data nkeonwe gbasara ya, n'usoro iwu Iwu 196/2003 ("Nzuzo Nzuzo") na Iwu (EU) 2016/679 ("GDPR").
Na saịtị ahụ ThatsLuck.com na-anakọta data igodo onu ogugu iji mata otutu ndi nleta na-agabiga na ibe ya na adreesị IP nke ndi na-ebudata ngwanrọ a, egosighi onye obula onye a ma jiri ya iji meziwanye ihe di na saiti a.
A na-arụ ọrụ nke data nkeonwe site na iji usoro elektrọnik na mgbasa ozi maka oge dị ezigbo mkpa iji mezuo ebumnuche nke anakọtara data ahụ yana, n'ọnọdụ ọ bụla, na-agbaso ụkpụrụ nke iwu, ezi, enweghị oke na mkpa enyere n'ihi na iwu dị ugbu a.
ThatsLuck.com nwere ike iji ihe a na-akpọ nkwụnye mmekọrịta. Ihe nkwụnye mmekọrịta bụ ngwa ọrụ pụrụ iche na-enye gị ohere itinye ọrụ nke netwọkụ mmekọrịta ozugbo na weebụsaịtị (ịmaatụ ọrụ "dị ka" nke Facebook).
Ihe ntinye niile na saịtị ahụ ka ejiri akara ngosi dị iche iche nke ntụle ntụnyere (dịka Facebook, Google, Twitter, YouTube, Amazon).
Mgbe ị gara na ibe nke saịtị ahụ ma soro nkwụnye ahụ na-emekọrịta, a na-ebufe ihe ọmụma kwekọrọ na ya site na ihe nchọgharị ahụ ozugbo na ikpo okwu lekwasịrị anya ma chekwaa ya.
Maka ozi gbasara ebumnuche, ụdị na usoro nke ịnakọta, nhazi, ojiji na nchekwa data nke onwe gị site na nyiwe mpụga, yana maka usoro eji eji ikike gị, biko kpọtụrụ iwu nzuzo nke saịtị ọ bụla nakweere.
ThatsLuck.com nwere njikọ nke saịtị ndị dị na mpụga: o doro anya na ọ nweghị ọrụ maka ọgwụgwọ nzuzo nke saịtị ndị a.
Ndị isiokwu ndị ahụ data data aka ha kpọtụrụ aha, nwere ikike igosipụta ikike ha n'ụzọ na n'ime oke nke iwu nzuzo na-eweta ugbu a ma nwee ikike ịrịọ:
nnweta (ha nwere ike ịrịọ nkwenye maka ma a na-arụ ọrụ data gbasara ha ma ọ bụ na ọ bụghị, yana nkọwa ndị ọzọ gbasara ozi ahụ edepụtara na ọkwa a, yana ịnata data n'onwe ya, n'ime oke nke ezi uche);
ndozi (ha nwere ike ịrịọ ka ha dozie ma ọ bụ gbakwunye data ha nwere ike inye anyị ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị nwere, ọ bụrụ na ezighi ezi);
ịkagbu (ha nwere ike ịrịọ ka ehichapụ data enwetara ma ọ bụ hazie na saịtị ahụ);
mmegide (ha nwere ike imegide nhazi nke data ha n'oge ọ bụla);
enwere ike ị nweta ha (ha nwere ike ịrịọ ka ha nata data ha, ma ọ bụ nyefee ha n'aka onye nwe ha gosiri ha, n'ụdị ahaziri ahazi, nke akụrụngwa na-ejikarị ma gụọ). Ọzọkwa, dị ka nka. 7, para. 3, GDPR, ikike ịwepụ nkwenye nwere ike igosipụta n'oge ọ bụla, na-enweghị ajọ mbunobi na iwu nke ọgwụgwọ dabere na nkwenye enyere na mbụ.
N'ikpeazụ, ndị ọbịa nwere ikike iwe akwụkwọ mkpesa na Supervisory Authority, nke Italytali bụ Nkwa maka Nchedo nke Data Nkeonwe.
Ọ bụrụ na ndị ọbịa achọpụta na ihe adịghị mma, ha nwere ike ịdọ aka na ntị onye na - achịkwa ya na ọ ga - eme ihe kwesịrị ekwesị ozugbo enwere ike.
Ike ịbanye na iwu nke ngalaba mpaghara ọhụụ, yana nyocha mgbe niile na mmelite nke ọrụ na onye ọrụ, nwere ike iduga na ọ dị mkpa ịgbanwe ụzọ na usoro akọwapụtara na ọkwa a.
Ya mere, ọ ga-ekwe omume na akwụkwọ a nwere ike ịgbanwe oge.
Anyị ga-ebipụta mgbanwe ọ bụla na ọkwa a na ibe a, ọ bụrụ na ha dị mkpa, anyị ga-eme ka ị mata ọkwa nke pụtara ìhè.
Versionsdị nke ozi a gara aga, ka osila dị, a ga-edebe ya iji nye ndụmọdụ.
Gụọ kwa ► iwu kuki